Israel oo Lacagtii Cashuurta ka Xannibtay Falastiin
Sarkaal reer Israel ayaa sheegay in dalkiisu uu go’aansaday inuu xannibo 125 milyan oo dollar oo ah cashuurihii Falastiin u soo xerooday ee Israel ay u uruuriso. Arrintaas ayuu sheegay in jawaab u tahay dadaalka ay Falastiin ku doonayso inay xubin kaga noqoto Maxkamadda Dambiya ee Caalamiga ah ee ICC.
Hawalaha dawladda Falastiiniyiinta ayaa ku tiirsan dakhliga cashuuraha ee bil walba ay Israel u soo gudbiso, lacagtaas oo ay ka bixiso mushaharka shaqaalaha dawladda.
Saa’ib Cureyqaat oo ah sarkaal sare oo Falastiin dhinaca wadahadalada u qaabilsan ayaa cambaareeyey falkan Israel, waxana uu sheegay in falkaasi uuna Falastiin ka joojin doonin dadaalka ay ugu jirto inay xubin kaga noqoto ICCda
Talaabadan Israel ayaa timid maalmo ka dib markii saraakiil reer Falastiin ahi ay codsi u gudbiyeen Qaramada Midoobay si ay xubin uga noqdaan ICCda. Talaabadaas ayaa awood u siin doonta inay dambiyo dagaal kusoo oogaan Israel.